Ny lira tiorka dia nianjera tamin'ny ambany ambany indrindra amin'ny dolara amerikana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Ny lira tiorka dia nianjera tamin'ny ambany ambany indrindra amin'ny dolara amerikana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Ny lira tiorka dia nianjera tamin'ny ambany ambany indrindra amin'ny dolara amerikana.
Amin'ny farany, ny fanapahan-kevitra momba ny politika ara-bola any Torkia dia tsy noraisin'ny banky foibe intsony fa noraisiny tao amin'ny lapan'ny filoha.
Ny lira Tiorka dia nandatsaka 20 isan-jato tamin'ity taona ity ary ny antsasaky ny fihenam-bidy dia tonga hatramin'ny fiandohan'ny volana lasa teo.
Ny mpanao ratsy indrindra amin'ny tsena vao misondrotra amin'ity taona ity, ny vola Tiorka dia nikasika ny ambany indrindra 9.3350 raha oharina amin'ny dolara androany.
Societe Generale dia namina ny fahatapahana isa 100 narahin'ny fiatoana avy amin'ny banky foibe satria ny lira dia mihodina mankany 9.8 raha oharina amin'ny dolara amin'ny faran'ny taona.
Ny mpanao ratsy indrindra amin'ny tsena vao misondrotra amin'ity taona ity, nilentika tamin'ny ambany ambany hatrany ny lira Tiorka raha oharina amin'ny dolara amerikana androany.
Ny vola Tiorka dia nikasika ny ambany indrindra 9.3350 raha oharina amin'ny dolara alohan'ny hamoahana fatiantoka sasantsasany. Niorina tamin'ny 9.31 tamin'ny 18:22 GMT.
Ireo mpandinika ara-bola dia mahita fa tsy misy fitsaharana kely ho an'ny volam-pirenena sahirana ao Torkia, raha jerena ilay antsoin'ny olona fa antenaina hampihena ny zanabola “tsy mitombina” amin'ny faran'ity herinandro ity.
Ny lira Tiorka dia nandatsaka 20 isan-jato tamin'ity taona ity ary ny antsasaky ny fihenam-bidy dia tonga hatramin'ny fiandohan'ny volana lasa teo, raha ny Banky foiben'i Torkia nanomboka nanome famantarana dovish na dia teo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'ny 20 isan-jato.
Tiorkia Ny filoha Recep Tayyip Erdogan Efa ela no nangataka ny fanalefahana vola ary ny fitaomana nananany, anisan'izany ny fanoloana haingana ny mpitarika ambony ny banky foibe, dia hita fa nanimba ny fitokisana ara-politika tato ho ato.
Taorian'ny fihenan'ny tahan'ny haingam-pandeha 100 volana lasa tamin'ny volana lasa teo dia nirongatra ny fidoboky ny lira, ny mpahay toekarena nalain'ny masoivohom-baovao Reuters dia nizara roa raha hanalefaka 50 na 100 teboka fototra ny banky foibe amin'ny fivoriana politika alakamisy.
Ny mpahay toekarena sasany dia nandà ny hamaly ny valim-pifidianana noho ny tsy fahatanterahan'ny banky foibe, indrindra taorian'ny nanonganan'i Erdogan ny telo tamin'ireo mpikambana ao amin'ny komity momba ny politika (MPC) tamin'ny herinandro lasa, anisan'izany ny roa heverina fa mifanohitra amin'ny fanapahana ny tahan'ny.
"Amin'ny farany, ny fanapahan-kevitra momba… ny politika ara-bola dia tsy noraisin'ny banky foibe intsony fa nalaina tao amin'ny lapan'ny filoha," hoy ny mpandinika ny Commerzbank.
Taorian'ny fikororohana ny banky foibe farany teo, Erdogan "Nanala tamin'ny fomba mahomby ny fanoherana rehetra ny fomba fijeriny tsy mahazatra azy fa ny zanabola avo lenta dia miteraka fiakaran'ny vidim-piainana avo lenta", hoy ny nosoratan'ireo mpandinika SocGen tao anaty naoty iray an'ny mpanjifa.
Na eo aza ny "tsy fandanjalanjana" amin'ny fihenan'ny taha ankehitriny, "tsy misy hevitra intsony momba ny fanondroana tohan-kevitra ara-toekarena nentim-paharazana amin'ny fandinihana ny mety ho fihetsiky [ny banky foibe]," hoy izy ireo nanoratra.